Tsvaga zvese zvakakosha kuti uone muVienna | Bezzia
Zvokuona muguta reVienna
Susana Garcia | 26/05/2021 10:00 | Lifestyle, famba
Vienna iguta rakakura uye rakanaka, ine runako uye kugadzikana kunofadza vese vashanyi vanopfuura napo. Guta guru reAustria rinotifadza nezvivakwa zvaro zvekare, makona ayo nemakamuri ayo. Kana iwe uchida maguta ese eEuropean, zvirokwazvo iyi haizokusiye usina hanya, nekuti iine chiya chakare chakavhenganiswa neiyo nyowani uye yekubata kwehunyanzvi iyo inofemerwa mumabvi ayo ese nemakona.
La Vienna guta inzvimbo yakakodzera kushanyira. Tiri kuenda kunoona kuti nzvimbo dzayo huru dzekufarira ndedzei, asi semune rimwe guta ripi zvaro unofanira kuzvibvumira kuenda uye kushanyira kona yega yega kana zvichibvira, nekuti tinogona kugara tichiwana nzvimbo dzinoshamisa. Zvibvumire iwe kutakurwa nerunako rukuru rweVienna parwendo rwako rwunotevera.
2 Hofburg muzinda
3 Austrian National Raibhurari
Este muzinda unozivikanwa seVersailles yeVienna, uye hazvisi zvishoma nezvakanaka zvinoonekwa. Muzinda uyu wakavakwa muzana ramakore rechi XNUMX panzvimbo yenzvimbo yekuvhima. Nekufamba kwenguva yaizove nzvimbo yezhizha yemhuri yeumambo kusvika kumagumo ehumambo pakutanga kwezana ramakumi maviri. Nzvimbo yaive zvakare nzvimbo yaive neakakurumbira Empress Sissi. Kuratidzwa kwekushanya kwemuzinda kunogona kubhurwa kuti iwe usarasikirwe nechinhu mudzimba dzako, unakirwe nemagadheni akagadzirwa, uye uwane tikiti rekuona iyo Imperial Carriers Museum padyo nemuzinda.
Inowanikwa pakati penhoroondo yeguta tinowana imwe imba yamambo inofanirwa kushanyirwa, Hofburg Palace. Yaive kweanopfuura mazana matanhatu emakore iyo pekugara kwemhuri yehumambo yeHabsburgs. Mukati memuzinda iwe unogona kushanyira dzimba dzekare dzeumambo, mamuseum uye machechi. Sisi Museum, yakatsaurirwa kune hupenyu hwamambo anozivikanwa kana sirivheri yedare, iri kunyanya kurova.
Austrian National Raibhurari
Yakavakwa muzana ramakore rechiXNUMX Zvinogona kutaurwa kuti ndeimwe yemaraibhurari enhoroondo akaisvonaka kwazvo pasi rose, saka kana iwe uchida iyi nzvimbo yenzvimbo haufanire kuipotsa. Muraibhurari tinogona kuona baroque dhizaini dhizaini, zvidhori zvekare, canvases uyezve hombe muunganidzwa wemabhuku.
Iyo Vienna State Opera ndiyo inozivikanwa kwazvo opera kambani pasi rose. Iyo Vienna Opera House yakavhurwa muna 1869 se Chivako cheRenaissance, chine basa naMozart. Muna 1945 bhomba rakakanganisa chivakwa uye zvakatora makore kuti rivhurwe zvakare. Nhasi tichiri pamberi pechiratidzo chechokwadi cheguta, chivakwa chenhoroondo chakakosha kwazvo. Iwe unogona kuona chivakwa mukati uye zvakare tora mafambiro akatungamirirwa. Uye zvakare, zvinokwanisika kutenga zvakachipa matikiti emabasa, saka iwo mukana wakanaka.
Iyi ndiyo musika unozivikanwa kwazvo muVienna yese uye yakaitwa kubva muzana ramakore rechiXNUMX. Ndiwo musika chaiwo waunogona kuwana ese marudzi ezvitoro zvekudya. Iyo yakakwana nzvimbo yekuona hupenyu hwezuva nezuva hwevanhu veVienna uye kutenga chikafu chemuno. Uye zvakare, kune nzvimbo dzekudya nemaresitorendi nematanga, zvichiita kuti ive nzvimbo yakanaka yekumira uye kuyedza chaiwo madhishi.
El paki yeguta, yakavhurwa muzana ramakore rechiXNUMX, ndeimwe yenzvimbo dzekuenda kuVienna. Iyo paki ine yechirungu dhizaini, ine chiyeuchidzo kuna Johan Strauss kana chivakwa cheKursalon. Mune paki iyi ingangoita zviuru makumi matanhatu nezvishanu zvemamirimita isu tichaona marudzi ese enzvimbo dzegirini nezvirimwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Lifestyle » Zvokuona muguta reVienna
Bvudzi rakakuvara? Tora zvakare nemazano aya
Kurara nemumwe wako kunobatsira kuhutano hwehuropi